sql injection with tool(havij) tutorial | Shwekoyantaw
Published : 9:56 PM Author : shwekoyantaw
sql injection with tool(havij) tutorial ပါ...ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကတော့ Havij ပါ...download ဆွဲပြီး extract လုပ်ထားပါ...register လုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် ဒီ Tutorial မှာ ပြဿနာမရှိပါဘူး...ကျွန်တော် unregistered အနေနဲ့ပဲပြပါမယ်...ဒါက တစ်ပိုင်း...
နောက်တစ်ခု sql vulnerability site ကိုရှာပါမယ်...ဘာနဲ့ရှာမလဲ??? ဒီနေရာ က sql injection dork list ကိုသုံးပြီးရှာနိူင်ပါတယ်...ဒါမှမဟုတ် Sql Poizon ကိုသုံးပြီးရှာပါမယ်...
ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ link တွေရလာပြီဆိုပါစို့....ကျွန်တော်တစ်ဆိုဒ်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်...ကျွန်တော်နဲ့ bro $n1ff3rg0d နဲ့ သတင်းဝင်ရေးခဲ့ဖူးသေးတဲံ့ http://skdc-consultants.com/news_updates.php?id=27 ဆိုတာလေးကို ရွေးလိုက်ပါမယ်....အိုကေ...ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ target ရပါပြီ...sql စထိုးပါမယ်..
စောစောက extract လုပ်ထားတဲ့ havij ကို install လုပ်စရာတောင် မလိုပါဘူး... double click နဲ့ run လိုက်ပါ...target ဆိုတဲ့ နေရာမှာ
ဆိုတဲ့ vulnerability link အပြည့်အစုံထည့်ပြီး analyze ကို နှိပ်လိုက်ပါ.. သိပ်တောင်မကြာလိုက်ဘူးဗျာ...current db ရပါပြီ...
Tables ကို နှိပ်ပါ... Get Tables ကို ဆက်နှိပ်ပါ... ရပြန်ပါပြီဗျာ...
အိုကေ...ကျွန်တော်တို့ column ဆက်ရှာပါမယ်...ဘယ် column ကိုရှာရမတုန်း ဆိုရင် admin ရဲ့ username နဲ့ password ရှိနိူင်မယ့် table ထဲက column ကိုဆက်ရှာရမှပါ...ဒီ tutorial မှာဆိုရင်တော့ admin username/password ဘယ်မှာရှိမှာတုန်း??? ... ရှင်းပါတယ်... tbl admin ဆိုတာလေးထဲမှာရှိမှာပေါ့ဗျ....ဟုတ်ဖူးလား tbl_admin ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်လေးထည့်ပြီးတော့ Get Columns ဆိုတာကို ဆက်နှိပ်ပါ...တွေ့ပါပြီဗျာ.... admin_name နဲ့ admin_password နဲ့ ...
admin_name နဲ့ admin_password ကို အမှန်ခြစ်လေးထည့်ပြီးတော့ Get Data ကို ဆက်နှိပ်ပါ...
80% အောင်မြင်ပြီလို့ ပြောလို့ရပါပြီ....admin panel ရှာဖို့နဲ့ နဲ့ password decrypt လုပ်ထားရင် password hash ကို ဖြေဖို့ကျန်ပါသေးတယ်... save data နဲ့ဖြစ်ဖြစ် save tables နဲ့ဖြစ်ဖြစ် username နဲ့ password ကို save ထားလိုက်ပါ...
အိုကေ.....password လည်း hash နဲ့မဟုတ်တော့ admin page ရှာဖို့ပဲကျန်ပါတော့တယ်... find admin ကို နှိပ်လိုက်ပါ... path to search မှာ site url ကို ထည့်ပါ... start ကို နှိပ်ပါ... ခဏစောင့်ပါ...admin page ရှာတွေ့ရင် admin page found ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်... တွေ့ပါပြီဗျာ...
admin panel url ကိုသွားပြီး admin username / password နဲ့ login ၀င်လိုက်ပါ...
uploaded my deface page!
source by mmhackforums.noonhost.com.../
Labels: SQL Injection, tools, tutorial, website |